ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း Ministry of Commerce/ Naypyitaw / June 07, 2019
ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရပြည်ပသို့ပို့ကုန်တင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကိုပို့ကုန်များသင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ(၆)လအတွင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ယခုကြေညာသည့်ရက်မှရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်းပို့ကုန်ဝင်ငွေအားလုံးကိုမိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင်နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ထည့်သွင်း နိုင်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်စာရင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန(ဖုန်းနံပါတ်-ဝ၁-၅၄၃၅၁၀၊ လိုင်းခွဲ-၂၆၇)သို့ ဆက်သွယ် စာရင်းရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ( ၆) ရက်
(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေဝင်ရောက်ရန် ပမာဏအများဆုံး ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီ(၄၀)ခုစာရင်း
7 Ayeyar Hinthar Trading Co., Ltd. U R Yudh 33912
8 Cornerstone Resources (Myanmar) Ltd. U Swe 13417
9 Fine Ply Myanmar Private Ltd. Mr.Ashok Garg 32835
10 Fu Xing Brothers Co., Ltd. U Iai Tun 6876
11 Global Moving And Storage Ltd. U Rudra Kumar 34865
12 Golden Lace Co., Ltd. U Thaung Win 16551
13 Green Hardwood Enterprise Ltd. U Khin Maung Lay 0140
14 Green Land Agriculture Co-Operative Society Ltd. U Soe Yin 25250
15 Green Signal Co.,Ltd. U Myint Thein @ Guru Sami 32949
16 J & M Steel Solutions Co.,Ltd. Mr.Yasuhisa Miwa 32182
17 Kaung Ya Nant International Trading Co., Ltd. U Nay Myo Oo 22992
18 Kyaw San Co., Ltd. U Kyaw Oo 17343
19 Kyay O Kyee Trading Co.,Ltd. U Kyaw Win 28145
20 Lighthouse Enterprises Ltd. Lee Seong Paik (a) U Thein Lwin 3187
21 Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd. Mr.Wang Xiaowei 23414
22 Myanmar Green Ocean Trading Co., Ltd. U Ye Myint 21056
23 Myanmar Rice Trading Co., Ltd. U Thant Zin 14014
24 Myanmar Tasaki Co., Ltd. Mr.Miyoshi Ueda 14768
25 Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. Mr.Zhang Dongsong 24906
26 Myanmar Yang Tse Copper Limited. Mr.Geng Yi 26884
27 Nan Htike Thazin Co., Ltd. U Hla Myint 21154
28 Pyei Phyo Aung Co., Ltd. U Aung Myat Ko 1297
29 Shwe Mya Thar Trading Co., Ltd. U Sai Win Hlaing 16348
30 Shwe Wah Yaung Agriculture Production Co,Ltd. U Lu Maw Myint Maung 23428
31 Super Soe Co., Ltd. U Soe Lwin @ U Karamu 0521
32 Texchem Food (Myanmar) Ltd. Mr. Masayuki Sugino 34986
33 Thamadi Family Trading Co., Ltd. U Tin Htay 21108
34 Than Let Hnin Hlaing Hein Co., Ltd. U Thura Hein 43124
35 Thein Than Kyei Sin Co, Ltd. U Kyin Sein (a) U Kyi Sein 24090
36 Trade Friends Trading Co.,Ltd. Daw Shin Shin Nyein 25966
37 Tun Myat Thu International Co.,Ltd. U Kyi Lwin 21685
38 Win & Win Co., Ltd. U Win Swe 12394
39 Yong Xin Industries Co., Ltd. U Han Yone Mo 24436
40 Yu Wai Yan Trading Co., Ltd. U Sai Aung Min Latt 23759